Stephenie Meyer adzoka. Bhuku idzva reTwilight saga ya Nyamavhuvhu | Zvazvino Zvinyorwa
Stephenie Meyer adzoka. Nyowani Twilight Saga bhuku raAugust
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Noticias, Novela
Stephenie Meyer ichangobva kuzivisa kuti inoburitsa bhuku idzva, rakanzi Pakati pehusiku Zuva, inotevera Nyamavhuvhu 4, pari zvino in Shona. Chichava chechitanhatu cheakabudirira akateedzana uye zvepasirese chiitiko chaive saga ye Twilight. Uye zvechokwadi, mamirioni evateveri vane nyaya dzevachiri vampire Edward Cullen naBella Swan ivo vari kupemberera mune yakakura nzira. Ngatimboongororai ...
1 Nguva yaEdward Cullen
2 Zvinoitwa nevateveri
3 Iyo Twilight Saga
Nguva yaEdward Cullen
Zvakanaka hongu, iyo nyowani mamiriro ndeyekuudza iyo nyaya kubva pakuona yeumwe wevanyori vakuru vaviri vesaga, Edward Cullen. Bhuku racho rinenge Mapeji 700 uye masocial network ane mamirioni evaverengi uye vateveri akazadzwa nemameseji emufaro, kupemberera uye kutarisira kukuru.
Mhinduro yevaverengi yave yekuti iyo dandemutande rakanyorwa naStephenie Meyer akadonha nguva pfupi mushure mekuzivisa kuvhurwa. Zvinofungidzirwa kuti munyori anogona kunge akashandisa zvinhu zvakaraswa asi izvo zvakaburitsa panguva iyoyo pakutanga. Vamwe vanobvuma pamwe nekuzviti ivo vari kuzobvisa a munzwa wemwoyo. Kune vamwe zvakare vanotarisira kuti ive kuunganidzwa kwezvose zvakateedzana uye kwete bhuku rekutanga chete. Uye pakupedzisira, pane izvo havavimbi kuti, sezvazvakaitika mune zvimwe zviitiko, saga haachina kufanana kana hongu izvo nguva dzafamba.
Zvakare, panogona kuve nyaya nyowani dzekuverenga iyo, inokwezva nefungu rekushuvira uye kutarisira kwekare, zvakare saina zviwane. Uye ndeye kugara uchipemberera kuti kune zvikonzero zvekuverenga. Asi iyo vanozvidza yeakateedzana, ayo anovandudza kuenderera kweizvozvo yakaderera mhando kuti vakamuwana muzuva rake. Anoshorawo iyo mukana, iri nyore sosi yemunyori yekuve zvakafanana neyakareruka shanduko yemutauri uye zvisina basa kuita saizvozvo.
Iyo Twilight Saga
Pasina kupokana, uye nekucherechedzwa kubva kuvagari nevasingazive, iyi saga ye Twilight haana kupinda munhoroondo yezvinyorwa nezvakanaka zvikonzero, asi isu tinofanirwa kuziva iyo kugona kukuru kwekubatana nechizvarwa chakati icho chakawedzera kune chakapfuura. Kune chikwereti changu, ndine shamwari dzaive dzatove mumakore makumi matatu uye dzakange dzakapindwa muropa.
Handiverengi pakati pemamirioni evaverengi kana vateereri avo vakatorawo mabhaisikopo apo shanduro dzakashandurwa kune hombe skrini dzakaburitswa, iine yakaenzana kana yakawanda budiriro. Asi ini ndinozvisimudzira zvakaenzana. Nekuti mabhuku nenyaya bestseller ndezvechimwe chinhu uye hachifanirwe kufuratirwa.
Ngatiyeukei misoro yenyaya dzino dzakateedzana dzemabhuku kuyaruka, kufungidzira uye kudanana iyo yakaratidza pamberi uye mushure meiyo genre:
Mwedzi mutsva (2006)
kudzikatidzika kwezuva (2007)
Midnight Night Sun
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Stephenie Meyer adzoka. Nyowani Twilight Saga bhuku raAugust